Ndakafunga Kusiya Zvekushumira Mwari | Bhuku Regore ra2015
NHOROONDO YOUPENYU Martín aiita kosi yekuti agova mupristi paakadzidza chokwadi. Kubva ipapo, abatsira vanhu vakawanda kuti vave vanamati vechokwadi.
NDAKAKURIRA mumhuri yainge yakazvipira chaizvo muchechi yeRoma uye yaida kuti ndizova mupristi. Saka pandaiva nemakore 12, ndakaita makosi matatu andaidzidziswa nemapristi akasiyana-siyana. Muna 1990, ndava nemakore 14, ndakabva ndakokwa kune imwe yemakoreji epamusoro anodzidzisa mapristi muDominican Republic.
Ndakafambira mberi chaizvo uye ndakaudzwa kuti kana ndikaramba ndichishanda nesimba ndaigona kuzoita bhishopu. Zvisinei, ndakaodzwa mwoyo. Pane kudzidza Bhaibheri, taidzidza uzivi hwevanhu. Uyewo, mapristi acho aiva nzenza dzemakoko. Pavakada kuita zveunzenza neni, ndakafunga kusiya zvekushumira Mwari.
APanguva iyoyo, murume nemudzimai vaiva mamishinari vakauya kuzoona akaundendi wepakoreji pacho ndokumupa bhuku rinonzi Mibvunzo Inobvunza Vechiduku—Mhinduro Dzinoshanda. Ndakarikumbira ndikariverenga kubva kwarinotangira kusvika kumapeto. Ndakabva ndati, ‘Izvi ndizvo zvandiri kutsvaga.’ Ndakabva pakoreji yacho, ndikatanga kudzidza neZvapupu, ndichibva ndatanga kupinda misangano. Ndakazobhabhatidzwa muna July 1991, pashure pemwedzi misere. Ndakatanga upiyona hwenguva dzose uye ndakazochata naMaría uyo aiva piyona. Tiri kushanda semapiyona chaiwo kubva muna 2006. Pane kuti ndisiye zvekushumira Mwari, iye zvino ndinoda kubatsira vanhu vane nzara yekuziva chokwadi kuti vave vanamati vake vechokwadi.